Ngathi - Shandong Zhihua Pipe Industry Co., Ltd ..
Ezizodwa kwi Ductile Iron zila Pipe neZilinganisi kunye yemiqadi yokulwa yoMlilo
Shandong Zhihua Pipe Industry Co., Ltd, eyasekwa ngo-2007, eneemfuno ezizodwa Ductile Iron zila Pipe neZilinganisi kunye yemiqadi yokuhlanganisa yoMlilo Ukulwa. Ibekwe kwi "World kite Capital" iWeifang City eyaziwa ngokuba yi-Chinese Grooved Pipe Fittings base base kunye neQingdao port.
Ukuthumela ngaphandle kwamazwe
UZhihua udlulile kwinkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001 kwaye iimveliso zayo ezinemiqolo ziye zafumana imvume ye-FM & U L & CE kwaye ziyafumaneka kwi-OEM / ODM yoMthengi. Kule mihla, inkampani inezinto ezine zeefektri ezinabasebenzi abali-1000 abanobuchule kunye neemveliso ezimbini:WFHSH ® ™ & FANGAN ® ™ kunye neSHUNAN ™, egubungela indawo ye-100000 yemitha yesikwere.
Ubuchule abupheli, uphando kunye nophuhliso aluze lume.
I-Zhihua yaziwa kakuhle kwaye idumela eliphezulu phakathi kwabathengi ngokholo lwayo, umgangatho, ixabiso kunye nenkonzo. Iimveliso zayo ezinemiqolo ziyathengiswa kuzo zonke izixeko ezingama-300 e-China kwaye zithunyelwa e-United State, Middle East, South America, Southeast, Korea, Europe Ect.
UZhihua uneeworkshops ezine eziphambili zokuvelisa iimveliso: i-workshop yokuphosa ngokuzenzekelayo, i-workshop ye-Machining, i-Painting workshop kunye ne-workshop yokubumba. Iifektri zeZhihua zixhotyiswe kwezona ndawo zihambele phambili kunye nezixhobo kolu shishino. Izixhobo ezingundoqo zemveliso ziqulathe i-8 eyona ilungileyo ye-416 yemigca yokuvelisa ethe nkqo; I-France FONDARC 180T abaxubeki besanti ezizenzekelayo, owona mgaleli ungcono kwihlabathi liphela. 6 Iziko lobushushu eliphakathi, 8 amaziko okubumba i-CNC, i-150 CNC lathes ye-Thread & Groove, 2 imigca yokutyabeka ekhethiweyo, i-5 epoxy ngokuzenzekelayo kunye nemigca yomatshini wokupeyinta, apho umthamo wonyaka ungaphezulu kwe-100000 iitoni.
Ngo-2019, iZhihua zisandula ukwakha umzi-mveliso wokucima umlilo, onokuthi uvelise izicima-mlilo ezizizigidi ezi-4 ngonyaka, utyalo-mali lulonke lungaphezulu kwe-RMB yezigidi ezingama-20, ikakhulu ezenza izicimi-mlilo eziphathwayo, izicima-mlilo eziphathwayo zekharbon diokside kunye nezinye iimveliso. Ukuphuhlisa iValve, i-hydrant yangaphakathi, i-Outdoor hydrant, i-adapter yomlilo kunye nezinye iimveliso zokukhusela umlilo.
Zininzi izinto ezinokuthi zitshintshe, kodwa ukuzibophelela kwethu kubungcali, umgangatho kunye nenkonzo yabathengi ayizukuyenza. Nxibelelana noZhihua ukuqala ukonga ixesha kunye neendleko.